ओझेलका खबर: एस.एल.सीमा बोर्ड टप गर्ने गुल्मेलीहरु, उनका परिवार र शिक्षकसँग बिशेष कुराकानी – Gulmiews
ओझेलका खबर: एस.एल.सीमा बोर्ड टप गर्ने गुल्मेलीहरु, उनका परिवार र शिक्षकसँग बिशेष कुराकानी
२०७१ सालको एस.एल.सी परिक्षामा बोर्ड टप गर्ने गुल्मेली को हुन् ? उनको घर परिवार कहाँ के गर्छ ? कसरी सम्भव भयो बोर्ड टप गर्न ? के बन्न चाहन्छन् उनी ? गुल्मीको सेवा गर्ने उनको कस्तो छ योजना ?
एउटा सरकारी बिद्यालयमा पढेर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै छात्रातर्फ नेपाल टप गर्ने गुल्मेली चेलीसँग बिशेष कुराकानी । उनको पनि पछी गुल्मी फर्केर सेवा गर्ने बिशेष योजना रैछ, के हो त त्यो? के भन्छन् उनका बुवा आमा?
गुल्मी जिल्लामै अहिलेसम्म सरकारी बिद्यालय तर्फको रेकर्ड तोड्न सफल महेन्द्र उच्च माबीका प्राचार्य र जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यार्थीहरुको अनुभव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ । साथसाथै सर्वाधिक अंकका साथ विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउन सफल गाउँको रेन्बो बोर्डिङको सफलताको कडी के हो ? बिद्यालयका प्रिन्सिपलसँगको कुराकानी ।
जीवनको गोरेटो: एउटै घरमा ४ जना दृष्‍टिबिहिन, त्यसै माथी एस.एल.सी तैयारीमा रहेको बेला गाडीले हानेर थप अपाङ्गता थपियो । छोटो समयमै तैयारी गरेर एउटै परिवारका दुई जना दृष्‍टिबिहिनहरुले प्रथम श्रेणिमा गत बर्षको एस.एल.सी परिक्षा पास गरे ।